Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Naverina velona indray izao ilay mpanao hosodoko masina Raphael
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Tokony hahazo loka i Italia noho ny faharetana manoloana ny valan'aretina COVID-19. Nahitam-bokany ny fahavononan'ny firenena handresy ny krizy amin'ny areti-mifindra, ny fanarahana ny toromarika ara-pitsaboana ary ny fahatokisana ny siansa.
ankehitriny, Italia, mpitarika eo amin'ireo firenena eoropeanina satria tsy dia iharan'ny fepetra faneriterena vaovao, dia afaka mamerina indray ny hetsika efa napetraka.
Anisan’ireny ny hetsika natokana ho an’ny Raphael tamin'ny fankalazana ny faha-500 taonan'ny fahafatesany (1520-2020), izay nanaloka tamin'ny taon-dasa noho ny vonjy taitra coronavirus.
Ny Palazzo della Cancelleria tamin'ny taonjato fahadimy ambin'ny folo (faritra ivelan'ny faritry ny Holy See ao afovoan'i Roma fahiny) dia iray amin'ireo ohatra tena tsara indrindra amin'ny maritrano Renaissance romana tany am-boalohany, dia hampiantrano hetsika takariva natokana ho an'ny "Divine Painter" - ny zavakanto. ary ny fiainan'i Rafaela,
Mirko Baldassarre, mpahay tantara momba ny zavakanto, mpiandraikitra ny fitarihana ara-javakanto, dia hilaza sy haneho ny sangan'asan'ny mpanao hosodoko avy any Urbino, mampifandray azy ireo amin'ny fanondroana sy famerenana indray ny sasany amin'ireo fizarana mazava sy manan-danja indrindra amin'ny fiainany fohy sy mahery. .
Ny fitantaran'i Maestro Baldassarre, mizara telo, dia ho voafehin'ny fampisehoana ireo sanganasan-kira nataon'i Wolfang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydin, Johan Sebastian Bach ary Antonio Vivaldi. Ireo sanganasa dia hataon'ny quartet string Aurora sy Rinaldi izay nohamafisin'ny fampisehoana sarimihetsika telo (Urbino-Rome-Florence) namboarin'ny mpamorona horonantsary Mattia Enrico Rinaldi sy ny sarin'ireo sanganasa nofaritan'ilay mpahay tantara momba ny zavakanto.
Ny hetsika, miaraka amin'ny bitany voalohany omaly 19 Novambra, miverina amin'ny 20, 26 ary 27 Novambra ary hatao ao amin'ny Aula Magna amin'ny seza manan-tantaran'ny Chancellery Apostolika (ao amin'ny fanokafana manokana), izay mbola mampiantrano ny fitsarana ankehitriny, ary ny Holy See: ny Apôstôlika Penitentiary, ny Apostolika Signatura (famotsorana ny Curia Romana ary ny fitsarana tampony amin'ny lalàna kanônan'ny Fiketana Masina) ary ny Rota Romana.
Alohan'ny hanombohan'ny hetsika, ny mpandray anjara dia avela hitsidika ny "efitrano roapolo andro" malaza miaraka amin'ny sary sokitra nosoratan'i Giorgio Vasari tamin'ny 1546 (episode avy amin'ny pontificate ny Papa Paul III Farnese).